फेरि देशै हल्लिनेगरी गयो ६.४ म्याग्निट्यूडको शक्तिशाली भूकम्प, ७ जनाको मृत्यु, कहाँ हो केन्द्रविन्दु ? — Imandarmedia.com
फेरि देशै हल्लिनेगरी गयो ६.४ म्याग्निट्यूडको शक्तिशाली भूकम्प, ७ जनाको मृत्यु, कहाँ हो केन्द्रविन्दु ?
एजेन्सी । कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को कारण विश्व नै अस्तव्यस्त बनेका बेला फेरि शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । क्रोएशियामा मंगलबार ६.४ म्याग्निट्यूडको भूकम्प गएको छ।
भूकम्पबाट कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन्। घटनामा कयौं व्यक्ति घाइते भएका छन्। क्रोएशियाको सरकारी टेलिभिनका अनुसार मृत्यु हुनेमा १२ वर्षिया बालिकासमेत रहेकी छन्। यस्तै ग्लीना भन्ने स्थानमा ४ जनाको मृत्यु भएको छ।
भूकम्पको झट्का बोस्निया, सर्विया र इटालीसम्म महशुस गरिएको थियो। घटनामा पुरिएकी एक महिलाको उद्धार गरिएको त्यहाँका संचारमाध्यमले जनाएका छन्।
यस्तै भूकम्पका कारण भत्किएको भवनले पुरेको कारबाट बाबु छोरालाई पनि जिवितै उद्धार गरिएको छ। क्षतिको पूर्ण विवरण आउने क्रम जारी रहेकाले घटनामा थप जनधनको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
यस्तै यता कोरोना भाइरसका कारण संकटग्रस्त मुलुकहरुलाई नयाँ वर्ष सन् २०२१ लाई उपचारात्मक वर्ष बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वान गरेको छ । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले विश्वका सबै समुदायलाई उपचारात्मक वर्षको रुपमा सन् २०२१ लाई मनाउन भिडियो सन्देश मार्फत् आह्वान गरेका हुन ।
नयाँ बर्षको अवसरमा शुभकामना सन्देश सहितको भिडियो सन्देशमा उनले महामारीका विरुद्धमा सँगसगै लड्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । “आउनुहोस्, शान्ति स्थापनाका लागि सँगसगै काम गरौँ, सहकार्य गरौँ र अबरोध तथा समस्याहरुको सामना पनि गरौँ”, उनले भिडियोमा भनेका छन् ।
सन् २०२० भरी कोरोनाभाइरसको महामारी चलेकाले सन् २०२१ मा यो महामारीबाट मुक्त भइसक्ने गरी काम गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । त्यस्तै विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ८ करोड २३ लाख २१ हजार ३५८ पुगेको छ । बुधबार बिहान यो समाचार तयार पार्दासम्म कोरोनाबाट १७ लाख ९६ हजार २६९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
विश्वमा संक्रमित रहेका २ करोड २१ लाख ९३ हजार ७९१ जना सक्रिय संक्रमित छन् । सक्रिय संक्रमितमध्ये १ लाख ५ हजार ९३९ को स्वास्थ्य अवस्था गभ्भीर छ । अहिलेसम्म ५ करोड ८३ लाख ३१ हजार २९८ जनाले कोरोनालाई जितेका छन् ।
सबैभन्दा रै संक्रमण फैलिएको अमेरिकामा १ करोड ९९ लाख ७७ हजार ७०४ जनामा संक्रमण फैलिएको छ । संक्रमित ३ लाख ४६ हजार ५७९ जनाको मृत्यु भएको छ । १ करोड १८ लाख ४४ हजार ४७२ जनाले कोरोना जितेका छन् । अमेरिकामा अहिले ७७ लाख ८६ हजार ६५३ जनामा सक्रिय संक्रमण छ । उनीहरूमध्ये २९ हजार १३२ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर छ ।
त्यस्तै दोस्रो संक्रमण फैलिएको भारतमा १ करोड २ लाख ४५ हजार ३२६ जनामा संक्रमण भएको छ । १ लाख ४८ हजार ४७५ जनाको मृत्यु भएको छ । ९८ लाख ३३ हजार ३३९ जनाले कोरोनालाई जितेका छन् । २ लाख ६३ हजार ५१२ जनामा सक्रिय संक्रमण छ । उनीहरूमध्ये ८ हजार ९४४ को स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर छ ।
संक्रमित मुलुकको ४० ‍औँ स्थानमा रहेको नेपालमा संक्रमितको संख्या २ लाख ५९ हजार ५४८ जना पुगेको छ । जसमा गत २४ घण्टामा ७०८ जना संक्रमित थपिएका हुन ।